Bangiyada iyo dukaamada waa weyn oo lagu amray in ay dhisaan musqul ay macamiishooda isticmalaan – The Voice of Northeastern Kenya
Bangiyada iyo dukaamada waa weyn oo lagu amray in ay dhisaan musqul ay macamiishooda isticmalaan
Star FM October 17, 2016
Agaasimaha waaxda faya dhowrka mr. Kepha Ombacho ayaa dhamaan subamaketyaada, bangiyada iyo guud ahaan xarumaha dadweynaha ay ka adeegtaan amar ku siiyay in macamiishooda ay ugu talagalaan goob ay xaajadooda ku gutaan iyadoo aan lacag laga qaadin.
Agaasimaha ayaa sidoo kale ka dhawajiyay in wasaarada caafimadka ay wax kama jiraan ka soo qaadi doonto leesimada xarumaha aan lahayn goob tayadeedu fiicantahay oo ay macamiisha ka heli karaan adeegyada la xiriira suulida.
Mr Ombacho ayaa xusay in howlgaladan looga gol leeyahay in lagu yareeyo xanuunada ka dhasha adeega suulida oo aan wanagsaneyn ama si fiican aan loo mareyn.
Dhanka kale , agaasimaaha ayaa sheegay in subamaketya badan oo ka jira dalka aynan musqulo lahayn, kuwa deegan lehna ay macamiisha lacag ka qadaan.
Xarumaha ganacsi oo aan amarkan waaxda kasoo baxay u hogaansamin, ayuu mr Ombacho sheegay in albaabada laisugu dhufanayo.
Agaasimaha ayaa hadalkan jeediyay sabtidi oo taarikhdu ay ku beegneyd 15-ka Oktobar xiligaas oo loo dabaal dagayay maalinta dunida ee gacma dhaqa oo lagu qabtay dugsiga hoose dhexe ee Hyrax Primary oo kuyaalo maamul goboleedka Nakuru.
Mr Ombacho ayaa dhanka kale maamul goboleedyada ugu baaqay in ay badiyaan goobaha gacmaha lagu dhaqdo ee ka jira cisbitaalada, dugsiyada, suuqyada, boostajada oo ayna dabagal ku sameyaan sida adeegan loo isticmaalo.
Bilooyinkii ugu dambeyay sida uu agaasimaha sheegay 28 counti oo ka tirsan dalka ayaa laga soo tabiyay cudurada ka dhasha nadaafad xumida oona laga hor tagi karo.
← Joseph Nkaissery oo digniin u jeediyay siyaasiyiinta
Boqorkii ugu dambeeyay ee wadanka Rwanda Kigeli V oo Mareykanka ku geeriyooday →